कोरोनाको सन्त्रास : बिदाको समयमा बालबालिकालाई घरभित्रै भुलाउन के गर्ने ?
हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार हो । जीवन रहेमात्र जीवनका हरेक गतिविधि गर्नसक्छ । त्यसैले हेरेक परिवार, समाज, राज्य र सरकारको पहिलो दायित्व व्यक्तिको सुरक्षित बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो ।
परिवार, समाज, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रकोप, घटना‡परिघटना र द्वन्द्वहरूमा सबैभन्दा जोखिम वर्ग बालबालिका हुने गर्दछन् । उनीहरू स्वयं आफ्नो संरक्षणका लागि सक्षम हुँदैनन् । उनीहरूको संरक्षणको दायित्व परिवार, समाज, राज्य, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नै हुने गर्दछ ।
कोभिड– १९ (कोरना भाइरस) को प्रकोपबाट विश्व आतंकित भएको छ । यसबाट कुनै पनि देश अछुतो छैनन् र रहने अवस्था पनि रहेन । हरेक देशले कोभिड– १९ बाट आ‡आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो बल बुताले भ्याएसम्म प्रयासरत छन् ।
अल्पविकसित देशमध्येको नेपाल पनि यसबाट आक्रान्त छ । सरकारले यसबाट सुरक्षित हुनका लागि आफ्नो क्षमता र तागत प्रयोग गरिरहेको छ । कोभिड– १९ बाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू अत्यन्त प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयमा केही फितलोपन देखिन्छन् ।
विश्वमा हरेक देश र निकायहरू आफ्नै डम्फु बजाउनमा व्यस्त देखिन्छन् । डब्लूएचओले विश्वमा संकट घोषणा गरी हरेकलाई सुरक्षित रहन आह्वान गरिरहेको छ । उता युनेस्को विश्वमा ८५ करोडभन्दा बढी विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भनी डाटा प्रस्तुत गर्दछ । विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको आँकडा प्रस्तुत भइरहेको छ । व्यापरीहरू संकटलाई दुरूपयोग गर्दै कालोबजारी गर्नमा तल्लिन छन् । अपराधिक सोचका केही मानिसहरू गलत अफवाह फैलाएर सामाजिक संजालमा आफ्नो लाइक एण्ड भ्यूज बढाउन लागि परेका छन् । केही विकसित देश संकटको बेला आप्mनो अभिष्ट पूरा गर्न विश्व समुदायलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
विश्व समुदायका लागि अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको हरेक व्यक्तिको जीवन सुरक्षा हो । यसलाई बेवास्ता गर्दै केही पक्षहरू आ–आफ्ना आँकडा प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यसको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । हाम्रा राष्ट्रियस्तरका केही निकायहरू तथा संस्थाहरू कोभिड– १९ को संकटबाट हरेक नागरिकलाई सुरक्षित बाँच्नका लागि सूचना संप्रेसण गर्नु पहिलो दायित्व मान्दैनन् । समाचारमा विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भयो । विद्यालय लामोसमय बिदा गर्दा घरमा बालबालिकालाई कसरी राख्ने जस्ता समाचारलाई प्राथमिकता दिएको देख्दा लाग्छ बालबालिकालाई कोरना भाइरसबाट संरक्षण गर्नेभन्दा अन्य विषय महत्त्वपूर्ण हुन् । अहिले हरेक सचेत
नागरिकको दायित्व समाजलाई आतंकित नगरी सहज जीवन जिउने सन्देश प्रवाह गर्नु र आफ्नो ठाउँबाट हुनसक्ने सहयोग गर्नु हो ।
कान्ति अस्पताल मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख डा. अरुण कुँवर भन्नुहुन्छ, कुनै पनि सरुवा रोग तथा भाइरसबाट पर्ने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण समूह बालबालिका हुन् । उनीहरू आफैं त्यसबाट जोगिन नसक्ने र शारीरिक विकासको महत्त्वपूर्ण चरणमा हुने हुँदा कुनै पनि सरुवा रोगबाट छिट्टै संक्रमित हुन पुग्दछन् । कोराना भाइरसले बालबालिकालाई कुन अवस्थासम्म प्रभाव पर्दछ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक अनुसन्धान सार्वजनिक नभएपनि यसबाट उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्नु हरेक अभिभावक तथा सरकारको दायित्व हो ।
बालबालिका जिज्ञासु हुने हुँदा विभिन्न टेलिभिजनका समाचार, सामाजिक सञ्जालमा आएका सन्देशहरूप्रति बढी नै उत्सुक हुने हुँदा कहिलेकाहीँ उनीहरूमा कोरना भाइसरको प्रकोपबाट आत्तिने, डराउने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिले विद्यालयहरू बन्द, एसईई परीक्षा रोकिएको अवस्थामा उनीहरूमा झन् कोरना भाइरसको बारेमा अत्यन्त डरलाग्दो छाप परेको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई जिज्ञासा राख्ने अवसर दिनुपर्दछ ।
डा. कुँवरका अनुसार बालबालिकामा रुघाखोकी लाग्ने, र्‍याल चुहिने बढी नै हुने गर्दछ । उनीहरूले जुनसुकै कुरा मुखमा हाल्ने, औँला मुुखमा हाल्ने, नाक र आँखा मिच्ने गर्दछन् । यसैले उनीहरूलाई हरेक क्षण सफा राख्नु, मूलत हातलाई अझ सफा राख्नु अभिभावकको पहिलो दायित्व हो । बालबालिकाले अभिभावक तथा ठूला मानिससँग अंगालो हाल्ने, हग गर्ने, अभिभावकको अनुहार छुँदा खुशी हुन्छन् । यसबाट अभिभावकहरू खुशी हुने गर्दछन् यसलाई अहिलेको परिस्थितिमा नगराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
उनीहरूका हरेक जीज्ञासालाई सहज ढंगबाट मेटाउनु उनीहरूलाई सुन्नु पर्दछ । साथै उनीहरूलाई कुनै पनि गतल सन्देश नदिई सहजीकरण गर्नु हरेक अभिभावकको दायित्व हो भन्नुहुन्छ डा. कुँवर । यसरी बालबालिकालाई जानकारी दिँदा डब्लूएलओ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकारले जारी गरेका सत्य र उपयुक्त सन्देशहरू बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा दोहोर्‍याइतेहर्‍याइ उनीहरूले नबुझेसम्म बताइरहनु पर्दछ । यो रोगबाट हुनसक्ने क्षति, असर र यसको नकारात्मक प्रभावका बारेमा उनीहरूको मनमा आतंक ल्याउने ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुहुँदैन ।
घर परिवारमा बालबालिकाका लागि अभिभावकले के गर्ने त ? यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । बालबालिका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण समूह भएकाले उनीहरूलाई ठूला अभिभावकलाई भन्दा अझ बढी सचेत गराई संरक्षण गर्नु पर्दछ । कोरना भाइसरको संक्रमण कुनै पनि शंका लागेमा उपचरका लागि अस्पताल जानु पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले शहर तथा गाउँलाई लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा हामीले बालबालिकालाई घरभित्र सुरक्षित र रमाइलो वातवरणमा राख्नु पर्दछ । हाम्रो परिवारमा कोही संक्रमित छैन भने पनि हरेक व्यक्ति सचेत भएर घरमा नै बस्ने गर्नु पर्दछ र बालबालिकालाई अझ सचेत गराई उनीहरूलाई घरभित्र बस्ने वातवरण सिर्जना गर्नु हरेक अभिभवाको पहिलो कर्तव्य हो ।
बालबालिकालाई घरभित्र राख्ने कुरा गरिरहँदा हामी नेपालीहरू शहरमा एउटा कोठामा ३ देखि ५ जनाको परिवारसम्म बसेका छौं । अभिभावकले काम नगरी भरे पेट भर्ने समस्या छ जस्ता कुरा उठ्नु हाम्रो परिवेशमा सामान्य हो । यसो भनिरहँदा अब बालबालिकालाई खुला छाड्ने भन्ने होइन, उनीहरूलाई कोठाभित्रै अथवा एका घरमा बस्नेहरू बीचको समझदारीमा उक्त घरका सबै मिलेर घरबाट बाहिर ननिस्की बस्ने वातवरण मिलाउनु हरेक अभिभावक र बालबालिकाको दायित्व हुन आउँछ ।
घरमा बस्दा बाहिरको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा रोक्ने । साबुनपानीले हात धुने । अनुहारमा सकेसम्म नछुन प्रेरित गर्ने, कसैलाई अंगालो नहाल्ने, चुम्मा नखाने, एक अर्काको जुठो नखाने, आइसक्रिम खाँदै नखाने, चिसो पेय पदार्थ सकेसम्म नखाने आदि । यसो भनिरहँदा अभिभावकले पनि हरेकपटक दूध तथा खाना खुवाउँदा बालबालिकालाई छुँदा साबुन पानीले हात धोएर मात्र गर्नु पर्दछ । घर बाहिरबाट भित्र आउनासाथ साबुन पानीले हात धुने जस्ता बानी सधैं पालना गर्नुपर्ने सामान्य नियमलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ ।
बालबालिकालाई घरभित्र कसरी टिकाउने ?
हरेक अभिभावकले आफ्नो आर्थिक तथा समाजिक हैसियत अनुसारको व्यवहार गर्दै आएका छन् । आप्mनो परिवारिक अवस्था अनुसार बालबालिकाका लागि बाघचाल, गट्टा, लुँडो, चेस, क्यारिम बोर्ड, पजल, बल्क गेमजस्ता सामान्य घरभित्र खेल खेल्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । बालबालिका घरभित्र रमाउने अवस्था ल्याउने अभिभावकले उनीहरूसँगै खेल्ने रमाइला कुरा गर्ने, कथा सुनाउने, परिवारका अवस्था, गाउँघरका कुरा गरेर उनीहरूमा सामाजिक संस्कृतिक संस्कार र परिवेशका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ ।
आर्थिक हैसियत अनुसार बालबालिकालाई सिर्जनशील बनाउन उनीहरूको रुचि र क्षमता अनुसारका चित्र बनाउने, वाद्यवादन, संगीत सुन्ने, गाउने जस्ता रमाइला क्रियाकलाप पनि घरभित्र गर्न/गराउन सकिन्छ । यसैगरी घर कम्पाउण्डभित्र खेल्न मिल्ने ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, डोरी, चुंगी, गुच्चा, टेबुलटेनिस, विभिन्न शारीरिक व्यायम गर्दै रमाइलो साथ समय बिताउने विधि अपनाउन सकिन्छ ।
बालबालिकाको उमेर अनुसारका चित्र कथा, कविता सुनाउने, लेख्न लगाउने, माटोको तथा कागजका सामग्री बनाउन प्रेरित गरी उनीहरूका सिर्जनामा प्रशंसा र थप उत्साह थपिदिएर उनीहरूमा भएको चहाना र क्षमतालाई यस अवधिमा प्रस्फुटन गराउन प्रेरित गरी महत्त्वपूर्ण समय बनाउन सकिन्छ ।
अभिभावकको फुर्सदको समयमा बालबालिकाको साथमा प्रेरणामूलक फिल्म हेर्ने, कथा–उपन्यास सुनाउने आदि । साथै उमेर अनुसारका विभिन्न क्रियाकलाप गर्न उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
घरभित्र विभिन्न खानाका परिकार बनाउन उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । हाम्रा हरेक समुदायका आ–आफ्नै मौलिक संस्कृति अनुसारका खानाका मौलिकता पनि छ । आफ्ना नानीबाबुलाई यस अवधिमा विभिन्न चाडपर्व अनुसारका मौलिक खान पकाएर खुवाउने र उनीहरूलाई चाड पर्वको महत्त्व र खानाका परिकार बनाउने सीप हस्तान्तरण गरेर यस समयमको उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
दैनिक जीवनमा अभ्यस्त गराउन उनीहरूलाई जुत्तामा पालिस लगाउने, सटको टाँक लगाउने, जुत्ताका तुना बाँध्ने, तरकारी काट्ने, कोठा घर सफा राख्ने, कितावमा कभर हाल्ने जस्ता सामान्य तथा जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञान र सीप रमाइलो गर्दै सिकाइ उनीहरूलाई स्वाभलम्बी बनाउने अवसरको रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।
पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउने जस्ता कार्यले बालबालिका र अभिभावकको बीचको सम्बन्ध र एक अर्कालाई आत्मसात गर्ने अवसरको रूपमा यस संकटलाई उपयोग गरौं । हजुरबा हजुरआमासँग बालबालिकाले राम्रा–राम्रा कथा कविता सुनेर र आफूले जानेका कुराहरू एक अर्कामा आदान–प्रदान गरेर समयलाई व्यवस्थित/ मर्यादित बनाउन र आत्मीयता तथा सद्भाव बढाउन सकिन्छ ।
हरेक अभिभावकले अहिलेको यस संकटको घडीमा बालबालिकालाई कोभिड– १९ बाट जोगाउन राज्यले निर्देशित गरेका हरेक आह्वानहरूलाई हुबहु पालना गर्नुपर्दछ । बालबालिकाको जीवनको सुरक्षा र उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यका लागि आफ्नो गक्षअनुसारका सेवासुविधा र सहज वातावरण सिर्जना गरी घरभित्रै बालबालिकालाई रमाइलो र सिर्जनात्मक अवसरको सिर्जना गरौं । कोरानाबाट बचौं र बचाऔं !!